Moments leh saaxiibo 46
Waa maxay Midabada, Ironka iyo Dhagxaanta Loogu Soo Daray toddobada meerayaasha?
Waxaa jira toddobo midab oo kala ah qoraxda, casaanka, oranjiga, jaalaha, cagaarka, buluugga, indigo, violet. Tani waa qeybinta raajada iftiinka qorraxda iyadoo la adeegsanayo sida korka ka muuqata. Toddobadaas midab ayaa laga yaabaa inay dib uga laabtaan xarun isla mar ahaantaana ay noqdaan iftiinka iftiinka midabbada ayaa la sheegay inay u dhigmaan toddobada meerayaasha, mars, qoraxda, meerkuriga, saturn, jupiter, venus, moon. Sidan oo kale waa toddobada bir, bir, dahab ah, meerkuri, basal, bir, naxaas, lacag. Midabada, biraha iyo meerayaasha ayaa la sheegay inay is-waafaqaan oo midba midka kale uu laxiriiro. Dhagaxyada, qurxinta, ametiska, dhagaxa dhiiga, dheemanka, saytuunka, agate, ruby, sardonyx, safayr, iyo ubax, iyo topaasi, iyo muraayad, waa in lagu xidhaa laba iyo tobanka bilood; mid kasta waxaa la sheegaa inuu leeyahay saameyn gaar ah marka la xidho maalmo gaar ah, laakiin inbadan gaar ahaan bisha ay khusayso. Qorayaasha mawduucyada sixirku waxay bixiyeen kala-saarisyo kaladuwan oo u dhigma midabada, biraha iyo meerayaasha. Wax kastoo kala soocid ah oo la aqbalo, ujeedadu waxay goaamineysaa nooca sharciyada iyo qaababka loo raaco si looga helo faa'iidooyinka iyagoo xiran, gooni u ah ama iskudarka, midabada, biraha iyo dhagaxa.
Ma Loo Baahan Yahay Xirashada Midabbada, Birta iyo Dhagxaanta Sida ay u Arkaan Yihiin Qorrax-Bixiye Nooc Ka Yahay Qoraalka Dhalashada?
Haddii qofku rumaysto wax ku oolnimada iimaanka; haddii uu iimaan leeyahay; haddii uusan dooneynin inuu dhaawac u geysto dadka kale asagoo xiraya midabbo, bir iyo dhagax - Haa. Hadduu u arko inay tahay wax lagu faano, hadana wuxuu isku dayaa inuu arko sida ay wax u socdaan; haddii uu rumeysan yahay awoodda midabbo, bir iyo dhagaxyo oo uu ugu labisan lahaa shay si uu ugula kaco saameyn aan saadaalin ama shar leh qofna — Maya.
Leedahay Midabada, Macdanta iyo Dhagaxyada Waxyaabo Muhiim ah, oo sidee loo dhalan karaa iyadoo aan loo eegin meerayaasha?
Midabada, macdanta iyo dhagaxahu waxay leeyihiin qiimeyaal gaar ah, wanaag ama xumaan. Laakiin xoogga midab kasta, bir iyo dhagaxyo waxaa lagu go'aamiyaa nooca asal ahaantiisa, qaabka loo diyaariyo, ama saameynta ay ku leedahay. Qofka u janjeera inuu kaftamo fikirka ah in midabyadu leeyihiin qiimeyaal gaar ah oo ay soo saari doonaan saameyn gaar ah, wuxuu lahaan doonaa sabab uu ku beddelo aragtidiisa haddii uu xiro dibi casaanka ka hor dibi.
Ninka isku dayaya magnet-ka ma tixgelin doono inuu yahay sheeko qayaxan ama sheeko suugaan ah oo ah in biryahannada qaarkood ay leeyihiin astaamo sixir. Qofna shaki ugama jiro inay jirto soojiidasho gaar ah oo dhagxaan ay leeyihiin shakhsiyaad da 'kasta leh. Ka sokow ujeeddooyin dhaqaale ama qurxin ujeedooyin midabyo leh ayaa leh saameyn gaar ah shucuurta dadka. Waxaa had iyo jeer la arkaa marka shakhsiyaadka qaarkood galaan xaalad maskaxeed ama shucuureed qiiro leh, ay arkaan midabyo qaarkood oo caadi u ah xaaladdooda. Tusaale ahaan: dambiilayaasha qirta dambiga waxay leeyihiin waxay arkeen casaan wax yar ka hor intaan la dilin dilkooda. Dhanka kale, kuwa la siiyay waqtiyo firaaqooyin ah, ayaa sheegaya inay arkaan midab huruud ama midab dahab ah markay u gudbaan xaalad deggan oo xasilloon ama rabitaan leh ujeedo.
Macdanta birta waxay leedahay muhiimada sixir iyo qiimaha, iyo sidoo kale adeegsiga guud ee loo adeegsado, iyo sidoo kale dhagxaan. Laakiin qiyamkaas waa in la bartaa oo la barto. Caqligu waa inuu feejignaadaa ka hor inta aan qiimahooda loo adeegsan ficil ahaan iyo qatar la'aan jirka iyo sababkaba. Daraasadda iyo tababbarku waxay lagama maarmaan u yihiin helitaanka aqoonta qiyamooyinka sixir iyo adeegsiga macdanta birta. Qofka qiyaasaya ama leh aragtiyo midabbo, bir iyo dhagaxyo ah, oo dareenkiisa gudaha aan la furin, oo aan u tababari doonin maskaxdiisa oo edbin doonin maskaxdiisa, wuxuu ku dhaqmi karaa caqiido indhoole ah oo natiijooyin ka hela, laakiin wuxuu ku farxi doonaa oo hoos u degi doonaa - Ku jees jeeso - oo indhoole ayuu ahaan doonaa.
Qofku wuxuu xidhan karaa midabbo, bir ama dhagaxyo iyadoo aan loo eegin meerayaasha marka uu leeyahay awooddaas oo ka dhalatay aqoonta, oo ka sarreysa saameyn kasta oo midabyo, bir ama dhagaxyo ah. Caqiidad adag iyo iimaan aan kala go 'lahayn oo aan lahayn awood baaxad leh oo wax u yeeli karta isaga, waxay daawo u tahay saamayn kasta oo ka timaadda walxaha jidhka. Rumaysad iyo xoogani waxay ka yimaadaan ujeeddo sax ah, fikirka saxda ah, fikirka saxda ah ee maskaxda. Marka qofku haysto kuwan, midabbada, biraha iyo dhagxaanta, oo leh saameyntooda meeraha ma lahaan karaan saameyn saameyn leh. Laakiin markaa, laga yaabee, isagu uma baahna inuu xidho.
Waa maxay Waraaqaha ama Nambarrada ku lifaaqan ama loo qoray Meelaha meerayaasha?
Waraaqaha, nambarada, magacyada, shaabadda, calaamadaha, ayaa si qoto dheer loogu sharraxay meerayaasha qorayaasha ku saabsan astrology, sixirka iyo sixirka, iyo akoonno kala duwan iyo dalabyo ayaa laga heli karaa buugaagta ku saabsan maaddooyinkaas. Wax sheegasho ah laguma sameyn karo aqoontaas, ama xaq uma lahan in la dhiibo. Wax aqoon ah oo faalso ah oo ku saabsan xarfaha iyo magacyada "meerayaasha" si toos ah looma siin karo buugaagta ama foomamka qoraalka ah. Buugagta ayaa laga yaabaa inay bixiyaan macluumaad badan, laakiin ma gudbin karaan aqoon. Aqoonta waa in lagu kasbadaa dadaal shaqsiyeed. Aqoonta waxaa lagu kasbadaa iyada oo natiijooyinka khibradaha loo adeegsado sida ugu wanaagsan ee loo adeegsado. Aqoonta xuruufta, nambarada iyo magacyada waxay ku imaan doonaan iyadoo la baaro oo la falanqeeyo lagana baaraandego qaybaha iyo qaababka xarfaha iyo isku darkooda. Qofka fikirkiisa maskaxeed ku wajahan dhinaca sixirka ee xarfaha, nambarada, magacyada, waxaa habboon in laga fikiro oo laga fiirsado iyaga, laakiin yaan la isku deyin in aragtiyaha la dhaqan geliyo ilaa aragtidu siiso xaqiiqo. Xaqiiqdii laguma kasbado ka soo kabashada iyo ku celcelinta xarfaha, nambarada, magacyada, midabada, bir ama dhagaxa. Xaqiiqda ku saabsan kuwan waxay ku imaaneysaa oo keliya awoodda iyo xakamaynta waxyaabaha ama xoogagga ay iyagu yihiin astaamaha dibedda, oo ay ku dhexjiraan damac, damac iyo shucuur dhexdeeda ku dhex jira. Inbadan oo noqon kara alkolojiyeyaal iyo saaxiriinno ayaa murugooday maxaa yeelay waxay isku dayeen inay adduunka ku dhammaystiraan, waxa laga qaban karo adduunka gudahiisa.
Midabbada la arki karo waa dib-u-eegista gobollada maskaxda iyo shucuurta. Macdanta birta waa uumiga ama adkaynta waxyaabaha aan la arki karin ee ay ku xiran tahay ruuxa walxahaas oo ay ku shaqeynayaan. Waxaa la mid ah ayaa laga dhihi karaa dhagxaanta. Birta iyo dhagaxuhu waa magnetic ama koronto. Meesha ay kuwan tagayaan, sheyga ama xoogagga ku xiran waxaa laga yaabaa inay noqdaan oo ay noqdaan kuwo shaqeeya, sida xoogga birlabku ku shaqeeyo bir, ama sida xoogga korantada ay u qabtaan silig naxaas ah. Xidhitaanka midabbo, bir ama dhagaxyo ayaa laga yaabaa inay kiciyaan oo ay ku farxaan taas gudaheeda, taas oo u dhiganta shayga ama xoog aan lahayn, oo ku kicin kara cunsurkan ama xoogaggooda inay ku dhaqmaan dareenkooda ku aaddan sida ay u eg yihiin. Adiga oo gacanta ku haaya waxa kaliya ee aan la'aan lagu xakamayn karin.